Kaalmada dhaqaale ee dib u noqoshada - Migrationsverket
Taageerada dib u degista qof wadankiisa
Stöd till återetablering – somaliska
Haddii codsigaaga magan galyada la diiday.oo aad aqbasho inaad ku noqoto wadankaaga, waxaad ka heli kartaa taageero Wakaalada Socdaalka Swedishka. Ma codsanaysid uun taageerada dhaqaalaha, laakiin sidoo heli waxaad helaysaa caawimada dib ugu noqoshada bulshadda wadankaaga addoo maraya dedaalada taageerada.
Kaalamda dhaqaale iyo dib u degida
Taageerada dhaqaalaha, taas oo loo tixraaco sida ‘kaalmada dib u dhexgalka bulshadda,’ ama ‘taageerada dib u degida’ waxaa la siiyaa kuwan dib ugu noqonaya wadanka halka xaaladahooda ay dib u dejinayaan nafahooda ay xadidan tahay iyaddoo ay sababtay xaalada amniga.
Waad heli kartaa taage­e­rada haddii aad dib ugu noqo­nayso mid ka mid ah wada­madan:
Afghaanistaan, Jamhuuriyadda afrikada dhexe, Jamhuuriyadda dimuqraadiga Kongo, El Salvador, Eritreya, Ciraaq, Yemen, Liibiya, Nayjeeriya, Bakistaan, Soomaaliya, Falastiin, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Itoobiya.
Ka akhri halka wax badan oo ku saabsan taageerada dhaqaalaha iyo sida loo codsado
Tallaa­booyinka kale ee taage­e­rada
Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimada dib ugu noqoshada bulshadda wadankaaga addoo maraya dedaalada taageerada. Dedaaladan taageerada waxaa la siiyaa kuwan dib ugu noqonaya wadankooda iyo kuw, tusaale ahaan, u baahan caawimada gelida suuqa shaqada ama u baahan talo sharci.
Kaalmada/taageerada waxa hadda la siiyaa oo loo soo bandhigaa dadka ku laabanaya waddamadan soo socda:
Afganistan, Ciraaq (Kurdistan), (Koonfurta iyo bartamaha) Ciraaq, Marocko, Pakistan, Nigeria, Itoobiya.
Akhri wax badan oo ku saabsan kuwa kale ee other hindisayaasha taageerada (oo af ingiriis)